Nzvimbo dzakanakisa dzeguta guru repasi rose kune vashanyi veUS
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nzvimbo dzakanakisa dzeguta guru repasi rose kune vashanyi veUS
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • France Kuputsa Nhau • India Kupwanya Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • Kuwait Kuputsa Nhau • Malta Kuputsa Nhau • Oman Kuputsa Nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Akanakisa epasirese guta guru nzvimbo dzevashanyi veUS.
Kuti uone kuti ndedzipi dzimbahwe dzakanakisa kushanyira pazororo, nyanzvi dzekufambisa dzakaongorora misoro mikuru makumi matanhatu neshanu pane zvakawanda zvezvinhu zvinosanganisira mutengo wehotera nekutakura, avhareji yemamiriro ekunze, uye huwandu hwezvinokwezva neresitorendi
Ankara, Turkey ndiyo yakanakisa guta guru pamitengo yehotera, iine avhareji mutengo we $ 45.74 husiku.
Luxembourg ine zvifambiso zveveruzhinji zvemahara uye ndiro guta guru repamusoro rekutakura munyika.
Valletta, Malta iguta rakanakisa rekukwezva (311 paKM per sq) uye yemaresitorendi (442.6 KM per sq).
Nguva yechando painosvika, maguta ndiyo nzvimbo dzakanakira kuenda kuzororo, izere nemijenya yekuita chero mamiriro ekunze.
Uye kune vafambi vane tariro yekutiza USA zvino, nezvirambidzo zvekufamba zvabviswa, maguta makuru kupota nyika anopa nzvimbo yakafanira yezororo yeguta.
Asi ndeapi maguta makuru akanakira vashanyi?
Kuti uone kuti ndedzipi dzimbahwe dzakanakisa kushanyira pazororo, nyanzvi dzekufambisa dzakaongorora misoro mikuru makumi matanhatu neshanu pane zvakawanda zvezvinhu zvinosanganisira mutengo wehotera nekutakura, avhareji yemamiriro ekunze, uye huwandu hwezvinokwezva neresitorendi.
Iwo epamusoro gumi akanakisa maguta makuru evashanyi kutenderera pasirese
chinzvimbo Guta guru nyika Avhareji Mutengo weHotera ($) Avhareji Yenzira Imwe Mutengo Wetikiti Yenzvimbo Yekufambiswa Kwevanhu Veruzhinji ($) Avhareji Temp (madigiri c) Avhareji Yekunaya Kwemvura (mm) Nhamba yeZvivaraidzo Kuwanda kwemaresitorendi Total Score
2 Abu Dhabi Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi $158.69 $0.55 27.92 42 591 2,778 6.24
4 Manama Bhahareni $180.87 $0.80 26.50 68 120 694 5.77
5 Yangon Saudhi Arabhiya $169.78 $0.87 26.00 66 218 1,289 5.74
6 Muscat Omani $210.66 $1.32 28.00 100 330 563 5.59
7 Paris Furanzi $193.34 $2.26 12.30 720 7,797 17,448 5.57
8 Kuwait City Kuweti $180.87 $0.85 25.70 128 423 1,144 5.56
9 Ankara Teki $45.74 $0.42 12.00 451 532 3,888 5.53
10 Jakarta Indonezhiya $81.77 $0.28 26.70 2,097 793 8,958 5.48
Valetta, Malta inoratidzirwa seyakanakisa guta guru repasirese ine huwandu hwakawanda hwe6.74 kubva pagumi, iine huwandu hwepamusoro hwezvinokwezva nemaresitorendi kubva kumaguta ese makuru.
Abu Dhabi, guta guru reUAE, riri pachinzvimbo chechipiri nechibodzwa 6.24 kunze kwe10. Avhareji yetembiricha muguta yakarova 27.92 madhigirii uye avhareji yekunaya kwemvura ingori 42mm pagore, zvichiita kuti iyi ive nzvimbo yakanaka kana iwe uri kutsvaga zuva.
New Delhi, India inotora nzvimbo yechitatu paavhareji mamakisi e6.06 kubva pagumi, neavhareji tembiricha ichikwira madhigirii makumi maviri neshanu nemakumi mana nemakumi mana nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nematanhatu nemaresitorendi kusarudza kubva.
Bangkok, Thailand ndiro rakanakisa guta guru rekushisa neavhareji ye26.6 madhigirii.
Cairo, Egypt ine mvura shoma ine 18mm chete yeavhareji yemvura pagore.